गति लिँदै नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग निर्माणले गति लियो – Saurahaonline.com
गति लिँदै नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग निर्माणले गति लियो
काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अन्त्य भएसँगै नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिन थालेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको हाज्मा÷आन्दो कर्पोरेशनबाट प्राविधिक टोली र मेशिन उपकरण आएसँगै सुरुङमार्गको प्वाल खन्ने काम अबको २ हप्ताभित्र शुरू गर्ने तयारी छ ।
नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग आयोजनाले सुरुङमार्गको पश्चिमतर्पmबाट (सिस्नेखोला) प्वाल खन्न शुरू गर्नेछ । पछि पूर्वी अर्थात् काठमाडौंको थानकोटतर्पmबाट पनि शुरू गरी दुवैतिरबाट प्वाल खनिने आयोजनाका कायममुकायम (कामु) आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए ।
अहिले सिस्नेखोलालाई डाइभर्ट गर्ने र सोही साइटतर्फ सुरुङमार्गको प्वाल खन्नका लागि बक्स ब्रिज तयार भएको छ भने पूर्वतर्पm कल्भर्टहरू बनाउने, पहुँच मार्ग बनाउनेलगायत कामहरू भइरहेका छन् । ड्रिलिङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसका लागि जापानबाट २० जनाजति प्राविधिक आइरहेको र सोही संख्याका प्राविधिकहरू ल्याउनका लागि अनुमति दिने तयारी गरिएको शाक्यको भनाइ छ ।
आयोजनाले ३०० टन विस्फोटक पदार्थ साइटमा ल्याइसकेको छ । तर, आवश्यकता भने ९०० टन रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।
२०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको सो सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य कार्य भने १ वर्षपछि हुँदै छ । आयोजनाले काम भने समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । जापान सरकारको सहुलियत ऋणमार्पmत बन्न लागेको यस सुरुङमार्गको कुल लागत रू. २२ अर्ब रहेको छ । यसमध्ये जाइकाले रू. १६ अर्ब तथा नेपाल सरकारले रू. ६ अर्ब बेहोर्ने छन् ।
सुरुङमार्गमा दुईओटा फ्लाईओभर र २ दशमलव ७ किमी सुरुङ हुनेछ भने बाँकी ३ किमी सडक बन्नेछ । हाल थानकोट–नौबीसेको झ्याप्ले खोलासम्मको दूरी करीब ९ किलोमीटर छ । सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि उक्त दूरी ५ दशमलव ७ किलोमीटरमा सीमित हुनेछ । आर्थिक अभियानमा समाचार छ।